Article | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More... | Page 5
Home >> Article (page 5)
पंचायत बन्यो ‘बेस्ट मुभी इन फरेन ल्याङग्वेज’, अभिनेत्री नितालाई ‘बेस्ट लिडिङ्ग एक्ट्रेस’ अवार्ड
नेपाली फिल्म र अभिनेत्रीले अमेरिकामा भएको फिल्म फेष्टिवलमा उत्कृष्ट अवार्ड पाउन सफल भएको छ । पचास बर्ष अघिको कथालाई पर्दामा उतारेको चलचित्र पंचायत र अभिनेत्री नीता ढुंगानाले अर्वाड पाएका हुन ।
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित सान्फ्रान्सिस्कोमा आयोजित ‘सान फ्रान्सिस्को फिल्म फेस्टिभल’मा नीताद्धारा अभिनित ऐतिहासिक चलचित्र ‘पंचाएत’ ले ‘बेस्ट मुभी इन फरेन ल्याङग्वेज’ विधामा उत्कृष्ट अवार्ड पाएको हो ।
अंग्रेजी फिल्म बाहेक अन्य विदेशी फिल्ममा पंचायतले उत्कृष्ट अवार्ड पाएको हो आफ्नो फिल्मले अवार्ड पाएकोमा निक्कै खुसी भएको कार्यकारी निर्माता तथा सञ्चारकर्मी रवि अधिकारीले बताउनुभयो ।
नेपालमा नेसनल अवार्ड समेत प्राप्त गर्न सफल अभिनेत्री नीता ढुंगाना सानै उमेर देखि अभिनयमा लागेकी नायिका हुन् । हालसम्म झण्डै २ दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी उनको चर्चित चलचित्रहरु दबाब, ६ एकान ६, नोटबुक, मसान , हाम्रो माया जुनी जुनीलाई, निर्भय लगाएत छन् ।
उनले पछिल्लो पटक चलचित्र पंचायत खेलेकी थिईन् । यो फिल्ममा नीताले पश्चिम क्षेत्रकी किशोरीले भोग्ने समस्यालाई जिवन्त उतारेकी छिन् ।
उनको ससक्त अभिनय कै कारणा अन्तर्रास्ट्रिय फिल्म अवार्डमा उनलाई सम्मान गरिएको हो । सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री निता ढुंगाना फ्रम नेपाल, भन्ने आवाजÞ र ताली संगै त्यों विशाल हल गुन्जायमान भएको थियो । उनको प्रतिभाले अन्तर्राष्ट्रिय उचाई पाउँदा त्यहाँ रहेका नेपालीहरुले गर्वको महसुस गरेका थिए । यहि अक्टोबर २५ देखी २९ सम्म फेष्टिभल भएको थियो ।
१५ बर्ष अघिबाट सुरु भएको यस फेस्टिबलमा गत वर्षदेखि नेपाली चलचित्रले पनि सहभागी हुन् थालेको साउथ एसियन संयोजक तथा नेपाल पर्यटनबोर्ड सन सनफ्रान्सिस्को लागि पर्यटनदूत प्रकाश थापाले जानकारी दिएका छन् गत वर्ष नेपाली चलचित्र तीन घुम्तीले उत्कृष्ट बिदेशी भाषाको चलचित्र पुरस्कार जित्न सफल भएको थियो ।
यता चलचित्र पंचायतकी नायिका नीता ढुंगानाले फिल्मसँगै आफुले अवार्ड पाएकोमा नेपाली भएर गर्व लागेको बताईन् । अमेकिारमा एक शो भएको चलचित्र अन्य शो समेत गर्ने तयारी छ । फेसबुकमा स्टाटस राख्दै उनले शव्दमा आफुले बयान गर्न नसक्ने समेत बताएकी छिन् ।
फिल्म फेष्टिवलमा हालीवुड र एसियन चलचित्रहरु गरि २ सय चलचित्रले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ग्रामिण कथा र पुरानो संस्कृति झल्काउने फिल्म पंचायतको लेखन तथा निर्देशन शिवम अधिकारीले गरेका हुन् । अभिकारीले आफ्नो योगदानको कदर भएको भन्दै अन्य अर्वाडमा पनि फिल्म पठाउने बताउनुभयो ।
गणेश गिरीको प्रस्तुति रहेको फिल्मको निर्माण सुशान्त श्रेष्ठ र शंकर सुवेदीले गरेका हुन् । सञ्चारकर्मी रवि अधिकारी फिल्मका कार्यकारी निर्माता हुन् ।
फिल्ममा सरोज खनाल र निता ढुंगाना मुख्य भूमिकामा छन् भने रुपा राना, गीता अधिकारी, गणेश गिरी, जाहान्वी बस्नेत, विशाल पहारी, किरण थापा, राजुबाबु श्रेष्ठ लगायतको अभिनय रहेको छ । अवार्ड प्राप्त चलचित्र चलचित्र पंचायत आगामी फागुन १७ गतेदेखि देशभर प्रदर्शन हुँदै छ ।
नीताको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै
नाट्यश्वरीदेवीको आशिर्वादले , मेरो वाल्यकालदेखी शुरूवाद भएकोअभिनय यात्रा, आज अमेरीकाको सानफ्रान्सीस्को(क्यालीफोर्निया) मा सम्पन्न “सानफ्रान्सीस्को ईन्टरनेशनल फÞिल्म फÞेस्टीवल” सम्म आईपुगेको छ।मन्चमा उभिएर ,उत्कृष्ट नेपाली चलचित्र अभिनेत्रीको अवार्ड( चलचित्र “ पन्चायत” ) प्राप्त गर्दै गरेको एउटा स्वणीम यो समयलाई म शव्दमा मात्रै वयान गर्न सक्दिन ।
यो समयमा मैले ,यो स्थान सम्म पुग्न मलाई प्रत्यक्षर अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने मेरा समस्त शुभचिन्तकर सहकर्मीर सन्चारकर्मी का साथै विशेषत मेरा सम्पुर्ण महान दर्शकवृन्द हरूलाई अन्तरमनवाट सम्झेकी छु र फेरीपनी म हार्दीक आभार व्यक्त गर्दछु ।
‘ऐश्वर्य’को कमाई तीन दिनमा झण्डै २ करोड
हालै प्रदर्शनमा रहेको चलचित्र ‘ऐश्वर्य’ले दर्शकको साम्रै साथ पाइरहेको छ । बिहीबार छठको अवसरमा प्रदर्शनमा आएको उत्तः चलचित्रको व्यापार शुरुका दिनमा सुखद छ । ओपनिङ गरेको तीन दिनमा चलचित्रले झण्डै २ करोडको व्यापार गरेको निर्माण पक्षले जनाएको छ ।
१०० भन्दा बढी हलमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्रले निर्माण पक्षले दिएको जानकारी अनुसार पहिलो दिन ४८ लाख दोस्रो दिन ५६ लाख र तेस्रो दिन ८० लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको छ । शनिवार चलचित्र युनिट दर्शकको प्रतिक्रिया बुझ्न हल–हलमा गएको थियो ।
दर्शकको उत्साहजनक उपस्थिति र पाएको प्रतिक्रियाले चलचित्र युनिट दङ्ग देखिन्थे । रमेश उप्रेतीको निर्माणमा तयार भएको चलचित्रलाई दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन् ।
दिन अर्जुन श्रेष्ठ, निर्मल शर्मा र किरण राणा उप्रेतीको संयुक्त लगानी रहेको ‘ऐश्वर्य’ मा रमेश उप्रेती, प्रशान्त ताम्राकार, केकी अधिकारी दीपिका प्रसाइँ, केशव भट्टराई, सुनिता ठाकुर, विकास खतिवडा, अमित पोखरेल र कोरियोग्राफर योञ्जनको अभिनय रहेको छ ।
आन्नपुर्ण बेसक्याम्पमा गरियो ‘तिमी सँग’को इन्डक्ल्याप, तेस्रोमा साम्राज्ञीको परीक्षा
ड्रिम्स र ए मेरो हजुर २, सफल भएपछि अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको लोकप्रियता बजारमा झनै बढेको छ । थुप्रै चलचित्रहरुको अफर उनलाई आई रहेका छन । साम्राज्ञी थोरै तर राम्रा चलचित्र खेल्ने योजनामा छिन । त्यही भएर नै अफर आएका मध्ये केही चलचित्र खेल्ने मौखिक सहमती मात्रै साम्राज्ञीले गरेकी छिन ।
दुई चलचित्र सफल भएपछि उनी तेस्रो चलचित्र तिमी सँगको काममा व्यस्त छिन । चलचित्रको पर्दामा पहिलो पटक अन्नपुर्ण बेस क्याम्पको दृश्य कैद गर्दै यो चलचित्रको छायाँकन सकिएको छ । साम्राज्ञीसँगै आकाश श्रेष्ठ, नाजिर हुशेन लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भुमिका रहेको प्रेमकथात्मक चलचित्रको टाइटल संगको छायाँकन बेस क्याम्पमा गरिएको हो ।
टुरिष्ट गाइडको प्रेम कथा बोल्ने चलचित्र प्रति साम्राज्ञी निक्कै आशाबादी छिन । चचित्रको क्यानभास मनमोहक छ, संगीत पक्षले पनि दर्शक स्रोताको मन जित्ने उनले आश राखेकी छिन ।
निर्देशक शिशिर राणा नेपाली चलचित्रमा अन्नपुर्ण बेस क्याम्पको सुन्दर दृश्य कैद गर्न पाउँदा भाग्याशाली महशुष गरी रहेका छन । पुनहिल, घोरोपनी, देउराली, घान्दु्रक लगायतका क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत चलचित्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निर्माता तथा लेखक समेत रहेका राणाले विश्वास लिएका छन ।
‘झोला’ टिम दोश्रो प्रोजेक्टमा व्यस्त , दाईजो विरुद्ध बन्यो ‘भोर’
दुई बर्ष पहिले दर्शकमाझ आएको व्यापारिक तथा समिक्षात्मक रुपमा सफल फिल्म ‘झोला’ निर्माण टिम यतिबेला दोश्रो प्रोजेक्टको काममा व्यस्त छ । बिना कुनै प्रचार प्रसार गुपचुप रुपमा यादवकुमार भट्टराईको निर्देशकमा नयाँ फिल्म ‘भोर’ (फर्स्ट लाईट) छायांकन सकिएको छ । मध्य पुर्वी नेपालको जनकपुरमा छठ पर्वको अबसरमा पत्रकार सम्मेलन गरि निर्माण टिमले फिल्मको सम्पुर्ण छायांकन सकिएको जानकारी गरायो ।
सम्पुर्ण दृश्य जनकपुरमा छायांकन गरिएको फिल्मको पहिलो पत्रकार सम्मेलन पनि जनकपुरमा गरिएको हो । निर्देशक भट्टराईले मैथिली भाषीहरुको वाहुल्यता भएको ठाउँमा उनिहरुकै समाजको समस्यालाई चित्रित गर्दै ‘भोर’ निर्माण गरेको बताए । मधेशमा जरो गाडेर बसेको दाईजो प्रथाको विषयलाई फिल्ममा समेटिएको छ । यो फिल्ममा अधिकांश मैथिली भाषी कलाकारहरुको अभिनय छ ।
कृष्ण धारावासीको कथामा निर्माणाधीन सो फिल्मको निर्देशन यादव कुमार भट्टराईले गर्नु भएको छ भने कार्यकारी निर्माता देवेन्द्र प्रसाद सुवेदी, निर्माता राज तिमिल्सिना र रामगोपाल थापा हुनु हुन्छ ।
‘झोला’ फिल्मको सफलतापछि आफूमाथि एउटा सफल फिल्म बनाउनु पर्ने दबाब परेको बताउँदै निर्देशक भट्टराईले मधेशको सबभन्दा ठूलो समस्या दाइजोको विकृत रुपलाई फिल्मको माध्यमले सम्पूर्ण नेपालीलाई देखाउन अघि सरेको बताए । ‘फिल्मको छायांकन सुरु गरेको समयमा ‘झोला’ सफलताको ह्यांङ्गओभरले आफू माथि दबाब बढेको भएपनि ‘भोर’मा डुब्दै जाँदा यहाँ जोडिएका कलाकारहरुको उर्जा र समाईएको विषयवस्तुले सबै भुलाएको भन्दै मनोरञ्जनसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व फिल्मले बोक्ने भट्टराईले बताए । मैथिली भाषी समुदायमा खिचिएको भए पनि फिल्मलाई नेपाली भन्दै भाषागत तथआ क्षेत्रिय फिल्मको भ्रममा नपर्न उनले सबैमा आग्रह समेत गरे ।
वरिष्ट साहित्यकार कृष्ण धारावासीको लेखनमा तयार भएको फिल्मको पटकथा निर्देशक भट्टराईले नै लेखेका छन् । फिल्ममा मूख्य पात्रको रुपमा मिथिलाञ्चलका प्रसिद्ध कलाकार राम नारायण ठाकुर रहँदा उनिसँगै मदन ठाकुर, परमेश झा, बिएन पटेल, राजेश सक्सेना, डली सरकार, अनितारानी मण्डल, संगिता देव, सारथी लामा, रितेश पाटली, सुरेन्द्र राय, धीरज ठाकुर लगायतका कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन ।
यतिबेला पोष्ट प्रोडक्शनको क्रममा रहेको फिल्मलाई दिपक बज्राचार्यले खिचेका हुन् । राज तिमल्सिना र रामगोपाल थापा निर्मातामा छन् । देवेन्द्र प्रसाद सुवेदी कार्यकारी निर्मातामा छन् । उज्जल ढकालले फिल्मको सम्पादन गरिरकेका छन् । लेखक धारावासी, निर्माता, निर्देशन तथा सिनेमाटोग्राफर सबै झोला टिमका सदस्य हुन् ।
नेपाली मौलिक कथा बोकेको झोला धाराबासीकै उपन्यासमा आधारित फिल्म थियो । उक्त फिल्मले सय बर्ष पुरानो नेपाली समाजको सतिप्रथाको कथा बोल्दै गर्दा सोहि प्रकारले मधेशमा २१ औं सताब्दीमा समेत विद्धमान दाईजो प्रथाको कथा’ भोर’मा उठाईएको छ । मैथिली शब्द मानिने ‘भोर’को अर्थ ‘बिहानी को किरण’ हो ।
यूरोपमा यसरी खिचियो ‘होलिडे’
निर्देशक बसन्त निरौलाले आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘होलिडे’ यूरोपका बिभिन्न मुलुकमा छायांकन गरेका छन् । कमेडी ड्रामा जनरामा बनेको ‘होलिडे’मा गौरव पहारी, पबित्रा आचार्य, बुद्धि तामाङ, श्याम श्रेस्ठ, बेनि ढुंगाना लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । यो चलचित्रमा पहिलो पटक नायिका आचार्यले सोलो अभिनय गरेकी छन् ।
’लम्फू’ चलचित्रमा तरकारीवाली, पारिश्रमिक लगाईन् सामाजिक काममा
काठमाण्डौ। ठिक एक बर्ष अगाडी एकाएक भाईरल बनेर विश्वभर चर्चामा आएकी कुशुम श्रेष्ठ उर्फ तरकारीवालीले नेपाली चलचित्र ’लम्फू’मा अभिनय गरेको बताएकी छिन् ।
गोपालचन्द्र लामिछाने निर्देशित यो चलचित्रमा अभिनय गरेबापत प्राप्त पारिश्रमिक कुशुमले अनाथ बालबालिकाको लागि खर्च गरेकी छिन् ।
यसै बर्ष रिलीज हुने ’लम्फू’मा उनले कस्तो भूमिकामा अभिनय गरेकी हुन् त्यो भने अहिले खुलाएकी छैनन् । ’तपाईँहरु र दर्शकले हलमा गएपछि नै मेरो भूमिकाबारे प्रष्ट हुनुहुनेछ, म अहिले नै सबैकुरा खुलाउन चाहन्न’ कुशुमले भनिन् ।
यो चलचित्रको छायांकन अघिल्लो बर्ष नै भएको थियो तर पनि तरकारीवालीको अभिनयको बारेमा भने गोप्य राखिएको थियो । अब चलचित्र रिलीज हुने समय आएकोले आफुले आफ्नो अभिनय रहेको खुलाएको कुशुमले बताईन् ।
कुशुमले चलचित्रमा अभिनय गरेबापत आफुले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण पारिश्रमिक सामाजिक कार्यमा लगाएको बताईन् ।’म जुन समाजमा हुर्के, बढेँ यहि समाजले आज मलाई तरकारीवालीको रुपमा विश्वभर चिनाएको हो । मलाई समाजले अनपेक्षित रुपमा यति धेरै कुरा दियो ।
मैले पनि समाजको लागि केहि गर्नुपर्छ भन्ने लागेर अनाथ९असहाय बालबालिकामा खर्च गरेकी हुँ’, कुशुमले भनिन्, ’यो मेरो पहिलो कमाई थियो र आगामी दिनमा पनि म सामाजिक कार्यमा अग्रसर रहिरहनेछु’ ।
चितवनको रत्ननगरमा शिक्षण पेशामा रहेका कुशुमका काका गोपीलाल श्रेष्ठले छोरीको सामाजिक कार्यको सोचले आफु निकै हर्षित भएको बताए । ’कुशुमले गरेको काम ’पावर’ र ’प्रोपर्टी’को लागि नभएर ’प्रेस्टिज’को लागि हो ।
समाजमा बसेपछि सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले यो गरिएको हो । जो मान्छे नांगा छन्, जो मान्छे भोका छन्, जो मान्छे किताबबाट टाढा छन्, जो मान्छेहरु दुईछाक खानबाट टाढा छन् उनिहरुलाई चलचित्रमा हभिनय गरेबापत प्राप्त रकमबाट थोरै न्यानोपना दिने जमर्को गरिएको हो’, गोपीलालले बताए ।
गोपीलालका अनुसार भाईरल भएको एक बर्षभित्र कुशुमलाई धेरै प्रकारका अफरहरु आएका थिए । एक दर्जन जति चलचित्र, उत्तिकै संख्यामा म्यूजिक भिडियो, विज्ञापन, मोडलिंग तथा सरकारी तवरबाट पनि धेरै अफरहरु आएको श्रेष्ठले बताए ।
शुरुमा चलचित्रमा अभिनय गर्ने सोच नबनाएको बताएपनि ’लम्फू’ टीमको सामाजिक उत्तरदायित्वको सोच र कुशुमलाई मास्टर डिग्री सम्म निशुस्ल्क शिक्षाको लागी छात्रावृत्ती प्रदान गरेको कारण कुशुमले अभिनय गरेको उनले बताए ।
यो बर्ष ’लम्फू’ चलचित्र बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरेको र यो चलचित्र रिलीज पछि सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सकिने कुराहरुमा मात्र सोचिने उनले बताए ।
गत बर्ष तरकारी बोकेर बजारतर्फ झर्दै गरेकी कुशुमका दुई फोटो रुपचन्द्र महर्जनले खिचेका थिए । गोरखाबाट चितवनको फिस्लिङ्तर्फ आउँदै गर्दा त्रिशुली नदिको झोलुंगे पुलमा तस्वीर कैद भएका थिए ।
उक्त फोटोहरु पहिले भारतमा भाईरल बनेका थिए । भारतियहरुले नेपालकी तरकारीवाली भन्दै भाईरल गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल र भारतका सञ्चारमाध्यमहरुमा कुशुम केहि समय चर्चाको बिषय बनेकी थिइन् ।
शिल्पा पोख्रेलको ‘हामी शरणार्थी’भदौ ८मा आउने
यहि भदौ ८ गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘हामी शरणार्थी’को सोमबार राजधानीमा एक भेटघाट कार्यक्रम गरिएको छ ।सत्य घटनामा आधारित चलचित्र ‘हामी शरणार्थी’लाई विजय केरुङले निर्देशन गरेका हुन् ।
कार्यक्रम नायिका शिल्पा पोख्रेलको अनुपस्थिती रहिन ।भुटानबाट लखेटिएर नेपालमा शरण लिएर बसेका शरणार्थीहरुको कथामा यो चलचित्र बनेको उनको भनाई थियो । उनले पूर्वका विभिन्न शिविरमा रहेका शरणार्थीको दुःख र कष्टलाई पर्दामा उतारेको बताए ।
नायिका शिल्पा पोखरेल अर्को एक चलचित्रको छायांकनमा व्यस्त रहेकाले पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुन सकिनन् । उनले, आफू यो चलचित्रमा दुई भतिज बोकेर भुटानबाट नेपाल आएकी यूवतीको भूमिकामा देखिएको टेलिफोन कुराकानीमा बताएकी छिन् ।
चलचित्रमा शिल्पा पोखरेलको साथमा जीवन भट्टराइको मुख्य भूमिका छ । चलचित्रमा अर्जुनकुमार पोखरेल, प्रकाश भण्डारी र प्रकाश शिवाकोटीको संयुक्त लगानी रहेको छ ।
चलचित्रमा हिमाल केसीको एक्सन, उत्तमजंग लिम्बुको संगीत, कमल राइको नृत्य, बैजु सिंहको पटकथा तथा संवाद, सौरभ लामाको छायांकन छ ।
रिलिजको नवौं दिन ‘छक्का पञ्जा’ हेर्दा जे भोगियो
ज्ञानेन्द्र तामाङ फिल्म ‘छक्का पञ्जा’ रिलिज भएको शनिबार नवौ दिन् । म फिल्मसम्बन्धि खुलेरै चासो राख्ने भए तापनि बजारमा सुपरहिट भइसकेको छक्का पञ्जा हेर्न मौका जुरिरहेको थिएन । शनिबार बिहानै योजना बनाँए । साथीलाई अफर गरेँ : आज फिल्म हेर्न जाऊ ।
दुवैले स्वीकारे । १२ देखि ३ बजेको शो हेर्ने सल्लाह भयो, नारायणगढको इन्द्रदेव सिनेमामा । फिल्मको तडकभडक र पाइरहेको सफलता हेर्दा सहजै टिकट पाइएला जस्तो मलाई लागेन । त्यसैले फोन गरे, इन्द्रदेवका सिनियर स्टाफ हरि दाइलाई । ‘मलाई १२-३ को शोको ३ वटा टिकट चाहियो’ : मैले भने । दाईले ‘माथिको सबै बु भइसक्यो तलको बाँकि होला म राखिदिन्छु’ भन्नुभयो ।
म दंग खाँए, रिलिज भएको ९ दिन भइसक्यो, १२ बजेको शो हेर्न बिहानै फोन गर्दा नि सबै बुक भइसक्यो ?? नेपाली होस या हिन्दी फिल्म हेर्दा मैले भोगेको नयाँ कुरा थियो यो । तैपनि तल नै बसेर हेरौ न भन्ने सोच बनाँए । सबैको सहमति पनि भयो ।
योजना अनुसार पउने १२ तिर हुइकिएँ नारायणगढ, जाने बेलासम्म हामी २ जना भयौ । एक साथी अन्तै ब्यस्त बने, फोन पनि रिसिभ गरेनन् । मसँग महिला साथी थिइन् । उनलाई लिएर लगभग सवा १२ तिर ‘छक्का पञ्जा’ चलिरहेको इन्द्रदेव पुगेँ । बाहिर मानिस यति भीड थियो कि, अगाडि बढ्नै समस्या । काउन्टरमा पुग्न मुस्किल देखिपछि हरिदाईलाई फोन लगाँए । ‘दाइ मैले भनेको टिकट ?’ दाईले २ वटा टिकट राखिसक्नुभएको रहेछ । मैले हामी २ जनामात्रै भएका छौ भन्ने जानकारी दिइसकेको थिएँ ।
मलाई एकछिन हल परिसरमै हेर्न मन लाग्यो । त्यहाँ भीड लागेका सबै टिकट नपाएर बसेका रहेछन् । काउन्टरमा लाइन लाग्नेहरु ३ बजेको शो का लागि टिकट लिइरहेका रहेछन । १२ को शो मा टिकट नपाएका हरु अधिकांश रुष्ट देखिन्थे हलका कर्मचारीहरुसँग । कतिपय युवाहरु त अश्लील बोल्दै तथानाम गाली गर्दै मुख चलाइरहेका देखिए । हल्ला उस्तै, दर्शकहरुमा कौतुहलता उस्तै अनि टिकट नपाएकोमा आक्रोश पनि उस्तै ।
अहो, यस्तो दिन पनि आउदो रहेछ नेपाली फिल्मका लागि मनमनै सोंचे । अचानक पछाडिबाट कसैले धाम मारे । फर्कदा चिनेकै साथी परेछ । ‘लौन टिकट मिलाईदिनुपर्यो । उनले भीडमा चर्कदै भने ।’ म हास्नबाहेक अरु के गर्न सक्थे र । ‘मलाई त बल्ल तल्ल पाँए । अब तपाईलाई कसरी…….’ मेरो कुरा रोक्दै उनले भने : ‘तपाई पत्रकार होइ्न त्यति पनि सक्दैन साथीहरुको लागि ? फिल्म पत्रकार भएपछि त हल्का चल्नुपर्यो नि यार हलतिर नि ।’
भीड थियो, बोल्नुको औचित्य देखिन, हास्दै छड्किए । यो भीडमा आधा दर्जन त्यस्तौ परिचित भेटिए जसले पत्रकारले टिकट मिलाईदिनुपर्छ भन्दै धाप मारे । तर मैले त्यस्तो गर्न कसरी सक्थे, आफ्नो ब्यथा कसलाई थाहा ? आफै त कसैलाई बिहानैदेखि गुहारेर टिकट बुक गरेको छु ।
सयौ बाहिरै थिए, हामी भित्रै प्रवेश गर्यौ । फिल्म सुरु भयो, सबै हास्न थाले, मलाई फिल्मकै संवाद र दृश्यले हास्न बाध्य बनाएन जति हलको बाताबरणले हास्न बाध्य बनाउथ्यो । सबै हासिराकै छन आफु चै किन चुप भन्दै म पनि हासिदिएँ बेलाबेलामा । कतिखेर चै फिल्मको दृश्यले हासो फुटेको पत्तो पाइएन पनि ।
फिल्म सकियो, सबै प्रफुल्लित । आहा, फिल्म हेरेपछि दर्शकको मुहारमा हर्ष सायद पहिलोपटक देखे । केहिलाई सोधे फिल्म कस्तो लाग्यो ? साझा अनि रेडिमेड जवाफ : ‘बब्बाल, राम्रो, दामी, वाह, वाह, यस्तो हुनुपर्छ नेपाली फिल्म ।’
अनि मैले पनि मनमनै भने हो साच्चै यस्तो हुनुपर्छ नेपाली फिल्म । दिपकराज गिरि, दिपाश्री निरौला लाई स्यालुट गरे मनमनै । फिल्मका सबै पात्रहरु परिचित थिए । सबैलाई दाहोर्याउदै सम्झिए । कति वजनदार अभिनय, कति सुन्दर प्रस्तुति अनि कति लोभ्याउने दृश्यहरु ।
यस्तै सोच्दै हलबाहिर निस्किए । भीड उस्तै ३ बजेको शोको टिकट २ घण्टा अघि नै सकियो रे । फेरी पहिलेकै अवस्था टिकट छैन, केहि चिनेकाले सताउन थाले । हतार हतार निस्किएँ गन्तव्यका लागि । फिल्म हेरेर निस्किदा पनि युद्ध जितेको अनुभव । हैट ।।
भीड थियो । निस्कने बेला टिकट मिलाउने हरि दाईलाई भेट्न पाइएन । भीडले धकेल्दै मलाई बाहिर पुर्याइसकेको थियो । हल सञ्चालक मुक्ति दाईलाई पनि हल प्रवेश गर्ने बेला हात मिलाउन बाहेक पछि देख्न पाइएन । सबैलाई मनमनै धन्यवाद दिदै, फर्किएँ । वाह क्या फिल्म छ छक्का पञ्जा
गोपिकृष्ण हलको दादागिरी कहिले सम्म ? दर्शकको माग अनुसार हल नदिदा ‘गाजलु’ निकालियो
आज बाट प्रदर्शनमा आएको यस बर्षको चर्चित चलचित्र ‘गाजलु’ राजधानीको चावहिलस्थित गोपिकृष्ण हल बाट पहिलो दिनको बिहानी सो बाट नै उतारिएको छ।चलचित्र उतार्नुको कारण चलचित्र न चलेर भने हैन चलचित्र हेर्ने दर्शकको माग अनुसार हाल न दिदा उक्त हललाई अरु सोको लागि चलचित्र न दिएको निर्माता निर्माता रोहित अधिकारीले दिएको जानकारी दिनु भयो ।
चलचित्र ‘गाजलु’ लाई कृष्ण र ओम हल दिइएको थियो तर दर्शक भने ति हलमा न अट्ने भए पछि निर्माण युनिटले ठुलो हल गोपिमा चलचित्र चलाउन अनुरोध गर्दा सो हल न दिएर सयौ दर्शक फर्किएका थिए ।बिहानी शोमा गोपिकृष्ण हलमा चलचित्र कृष्ण र ओममा हाउफूल थियो तर दर्शक र्फकदा पनि ठूलो हल दिइएको थिएन ।गोपि हलमा ‘हाउसफूल ३’ लगाइएको छ र गाजलु युनिटले आफ्नो हलमा चलाउन अनुरोध गर्दा सो हल नदिनुको मुख्य कारण हाउसफूल ३’लाई गोपिकृष्ण मूभिजले आफै किनेर ल्याएको हो । गोपिकृष्णले आफूले किनेर ल्याएको ‘हाउसफूल ३’लाई दोश्रो हप्तामा पनि ठूलो हलबाट नहटाउने शैली अपनाएपछि निर्माता अधिकारीले यो डिसिजन गर्नुपरेको बताए ।निर्माता अधिकारीले ११ बजेको शोबाट ‘गाजलु’ नचलाउने निर्णय गरिएको बताए । उनले दर्शकलाई गोपिकृष्ण बाहेक अन्य पायक पर्ने हलमा गएर चलचित्र हेर्न आग्रह गरे ।
यो त् भए चलचित्र गाजलुले गोपिकृष्णमा फिल्म न दिनुको कारण तर यस्तो लफडा भने गोपिकृष्ण यो भने पहिलो हैन ।केहि समय अघि चलचित्र कबड्डी चलाउदा पनि हलले यस्तै व्यवहार गरेकोले कबड्डी सो हलमा आफ्नो फिल्म नै हालेको थिएन।आफूले किनेर ल्याएको हिन्दि फिल्म हालेर पैसा कमाउन पल्किएको यस हलले अरुको चलचित्र कसरि हुन्छ न चलोश भन्नको लागि खाली रहेको हल समेत हाउसफूल भन्दै अरु नै फिल्मको टीकट दिने गरेको गुनाशो पटक पटक आउने गरेको छ ।
यस्तै कुरा हुने सम्भावना देखे पछि बिकाश आचार्यले पनि नाई न भन्नु ल ३ गोपिकृष्ण हलमा चलाएका थिएन् ।तेही बेला रिलिज भएको हबल्दार सुन्तली फिल्म टिवीमा प्रोमो बजाए बापत सबै पैसा आफुले पाउने हुदा नाई न भन्नु ल ३ सानो हल दिने हुदा तेती बेला पनि सो हलमा नाई न भन्नु ल ३ दिएको थिएन ।
नेपाल भित्रिने धेरै जसो हिन्दि चलचित्र गोपिकृष्णले नै नेपालको किनेर ल्याएको हुन्छ जसले गर्दा उसले सो फिल्म चलाउन अरु नेपाली चलचित्रलाई राम्रो हल न दिने अनि नेपाली फिल्मको टिकट माग्दा सो फिल्म हाउसफूल भएको भन्दै आफुले वितरण गरेको फिल्मको टिकट दिने गरेको नेपाली फिल्मका निर्माताले बताउदै आएका छन् ।गोपिकृष्णले नै संचालन गरेको टिवी फिल्मी बाट नेपाली चलचित्रको प्रोमो बजाए बापत लाखौ रुपिया लिने अनि जब नेपाली फिल्म चलाउने बेला आयो आफुलाई फिक्समा दिन बाध्य बनाउने अनि निर्माताले न मान्ने सानो हलमा फिल्म हालेर निर्माता मर्ने गरेको छ ।
यस अघि यस हलले नेपाली फिल्मका निर्मातालाई विभिन्न बहानामा मर्ने गरेको आज गाजलुले भने बरु हलमा चलचित्र न दिने यिनीहरु न झुक्ने निर्णय गरेको छ धेरै चलचित्रकर्मीले यो निर्णयलाई राम्रो भनेका छन् ।हिन्दि फिल्म नेपाल भित्राएर नेपाली फिल्मलाई सधै पेल्ने यस्ता हल बिरुद्द सबै चलचित्रकर्मी एक भएर लाग्ने हो भने भोलिका दिनमा यस हललाई नेपाली फिल्मलाई हेप्न सक्ने छैन ।
बहुप्रतिक्षित चलचित्रको रुपमा हेरिएको चलचित्र ‘गाजलु’ लाई हेमराज वीसीले चलचित्र ‘गाजलु’निर्देशन गरेका हुन् ।चलचित्रमा अहिलेका स्टार नायक अनमोल केसी पूर्व मिस नेपाल श्रृष्टी श्रेष्ठ, सलोन बस्नेत, गौरव पहारी, मेनका प्रधान र ऋतिक शाही लगायतको कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ ।